Izinyathelo zasekolishi nezokufundela umsebenzi noma ngabe abafundi bakulungele yini ukuthola impilo ye-postecondary ngokuthola iziqinisekiso zasekolishi noma zomsebenzi ngenkathi besasesikoleni esiphakeme. Ubufakazi bekolishi noma bokwenza umsebenzi kufaka phakathi ukuqeda ngempumelelo isitifiketi semkhakha esivunyelwe; ukuphothulwa ngempumelelo kwamahora okungenani amathathu wezifundo zasekolishi; amaphuzu adlulayo esivivinyweni sokubekwa ngokuthuthukile; noma isikolo esidlulayo ku-International Baccalaureate test. Iziqu eziseqenjini elisanda kuphothulwa elibhalise esikoleni zifakiwe lapho kubikwa imininingwane yasekolishi neyokulungela umsebenzi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole ka-2018-2019)
Ngabe isikole silungiselela kangakanani abafundi basekolishi nomsebenzi wokuziphilisa?
Izinyathelo zasekolishi nezokufundela umsebenzi noma ngabe abafundi bakulungele ukuthola izinto abazenzayo ngokuthola iziqinisekiso zasekolishi noma zomsebenzi ngenkathi besasesikoleni esiphakeme.
Abathweswe iziqu bathola ikolishi noma i-career mbiri
Isilinganiso Sombuso 68.3%
Amaphesenti abafundi abaphumelela izivivinyo ze-IB
Amaphesenti abafundi abaphumelela izivivinyo ze-AP
Amaphesenti abafundi abadlula izifundo ezimbili ezibekiwe
Amaphesenti abafundi abahola izimboni ezijwayelekile zezimboni
Benza kanjani abafundi kulesi sikole uma kuqhathaniswa nemigomo yesikhashana yesifundazwe yokufundela ikolishi nokufundelwa umsebenzi?
Okuhlosiwe kwesikhashana kukhombisa inqubekela phambili edingekayo ukufezekisa izinhloso zesikhathi eside zombuso zokufunda ikolishi nokufundelwa umsebenzi.
Ngabe abafundi bahlangabezana nezimpawu zokubekelwa ikolishi namakhono wokufunda emisebenzini ekuhlolweni kokulungela ikolishi?
Amabhentshi amakilasi nokulungela ukwenza umsebenzi yizibalo eziphansi ezilindelwe ukuba abafundi babe namathuba aphezulu okuphumelela ekolishi nasemisebenzini.
Isilinganiso Sombuso 52.3%
Isilinganiso Sombuso 56.7%
Amaphesenti amangaki abafundi kulesi sikole ahlanganyela kwi-SAT ne-ACT?
Incazelo yokubamba iqhaza kwe-SAT ne-ACT
Funda kabanzi ngokulungela kwekolishi e-Indiana. https://www.in.gov/che/2489.htm